टि–२० सिरिजः भारतले टस जित्यो, अन्तिम खेलमा रोहितलाई विश्राम - Everest Dainik - News from Nepal
टि–२० सिरिजः भारतले टस जित्यो, अन्तिम खेलमा रोहितलाई विश्राम
काठमाडौं, साउन २१ । वेस्ट इन्डिज विरुद्धको टि–२० सिरिजको अन्तिम खेलमा पनि भारतले टस जितेको छ । अघिल्लो खेलमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको भारतले आज भने बलिङ रोजेको छ ।
सिरिजमा भारत २–० ले अगाडि छ । यदि आजको खेल जिते भारतले सिरिज क्लिन स्विप गर्नेछ । पिच हिलाम्य भएकाकारण ढिला गरि खेल सुरु भए पनि २०–२० ओभरकै हुने भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस भारतविरुद्ध वेस्ट इन्डिजको खराब प्रदर्शन, ३५ रन नबनाउँदै गुमायाे ५ विकेट !
भारतको प्लेइङ ११ः लोकेश राहुल, शिखर धवन, ऋषभ पन्त, विराट कोहली, मनीष पाण्डे, क्रुणाल पांड्या, दीपक चाहर, राहुल चाहर, वाशिङटन सुन्दर, भुवनेश्वर कुमार र नवदीप सैनी।
वेस्ट इन्डिजको प्लेइङ ११ः इभन लुईस, सुनील नारायाण, शिमरोन हिटमायर, निकोलस पूरन, किरण पोलार्ड, रोमन पावेल, कार्लोस ब्रार्थवेट (कप्तान), कीमो पउल, शेल्डन कोट्रेल, फावेन आलेन र ओशन थमस।
याे पनि पढ्नुस भारतविरुद्धको सिरिजका लागि वेस्ट इन्डिजद्वारा टोली घोषणा, को–कोले पाए मौका?
ट्याग्स: भारत भर्सेस वेस्ट इन्डिज